Xiaomi Mi MIX 3 5G: Tilmaamaha, qiimaha iyo bilaabista | Androidsis
Xiaomi Mi MIX 3 5G: Taleefanka 5G ee ugu horreeya ee Xiaomi waa mid rasmi ah waana kuu tijaabinay
Xiaomi waa mid ka mid ah halyeeyada Axadan MWC 2019. Maaddaama sumaddu ugu dambeyntii naga tagtay taleefankeedii ugu horreeyay ee leh 5G. Sidaad horeyba u ogaan laheyd dhowr bilood kahor, Waa nooc gaar ah Mi MIX 3. Waxaa la rajeynayaa in qaabkani uu imaan doono munaasabada ka dhaceysa magaalada Barcelona, ​​wax horey u dhacay durba. Xiaomi Mi MIX 3 5G hadda waa rasmi.
Sida aad filan karto, dhowr isbeddel ayaa lagu sameeyay qalabka. Isbedelka ugu horreeya, oo suurtagal ah kan ugu muhiimsan, taasi waa tan Xiaomi Mi MIX 3 5G ay la timid Snapdragon 855, processor-ka ugu awoodda badan suuqa, sidaas darteed waxay leedahay taageeradan 5G. Waxbadan ayaan idinkugu sheegi doonaa hoos.
Marka la eego naqshadeynta, waxay haysaa astaamaha waxaan awoodnay inaan ku aragno tusaalaha asalka ah. Sidaa darteed waxaan heleynaa dhamaadka dhoobada, marka lagu daro naqshadeyntaas slider, oo soo jiidatay dareen aad u badan markii la bilaabay dayrtii hore. In kasta oo gudaheeda aan ka helno isbeddeladan.
Kuwani waa isbeddelada suurto galiyay Xiaomi Mi MIX 3 5G waa taleefankii ugu horreeyay ee casriga ah ee sumcadda Shiinaha si loo taageero 5G. Marka lagu daro mid ka mid ah kuwa ugu horreeya suuqa si rasmi ah.
1 Tilmaamaha Xiaomi Mi MIX 3 5G
Tilmaamaha Xiaomi Mi MIX 3 5G
Hoos waxaad ka arki kartaa qeexitaannada buuxa ee dhammaadka sare ee sumadda Shiinaha. Sidaan soo sheegnay, waxaan helnaa isbeddello yar marka la barbar dhigo qaabkii asalka ahaa. Si fudud kiiskan waxaan ku heleynaa processor iyo modem kuwaas oo ah waxa suurtagal ka dhigaya qalabku wuxuu leeyahay sida 5G waafaqsan.
Faahfaahinta farsamada Xiaomi Mi MIX 3 5G
Tusaale MI MIX 3 5G
Nidaamka hawlgalka Android 8.1 Oreo oo leh MIUI 10
Screen AMOLED 6.39 inji oo leh xalka 1080 x 2340 pixels iyo saamiga 19 5: 9
Gacaliye Qualcomm Snapdragon 855 octa-core
Kaydinta gudaha 64 / 128 / 256 GB
Kaamirada gadaal 12 + 12 MP oo leh apertures f / 1.8 iyo f / 2.4 iyo LED Flash
Kaamirada hore 24 +2 Xildhibaan leh fur f / 1.8
Xuduudaha kala duwan 5G Dual SIM Bluetooth 5.0 WiFi 802.11a / b / g / n / ac USB-Nooca C
Tilmaamo kale Dareemida faraha faraha NFC 3n 3D wejiga furitaanka
Batariga 3.800 mAh oo leh lacag-bixin deg deg ah iyo lacag-la’aan wireless
Qiimaha 599 euros
Mid ka mid ah isbeddelada aan ka helno tusaalaha ayaa ah joogitaanka xulashooyin badan oo keyd ah. Qalabku wuxuu horey u lahaa saddex nooc marka loo eego RAM, isagoo ahaa kii ugu horreeyay ee sumcadda Shiinaha ee la yimaada 10 GB RAM. Qeybtan oo leh 5G waxaan mar kale ku aragnaa saddexda nooc ee RAM. Sidoo kale seddex ikhtiyaar marka la eego keydinta, 64/128 ama 256 GB awood. Si markaa isticmaalehu u awoodo inuu doorto midka isaga ku habboon.
Haddii kale waxaan arki karnaa inaan wax isbeddel ah lagu sameynin Xiaomi Mi MIX 3 5G. Qalabka wuxuu ilaaliyaa qeexitaankiisa asalka ah. Mid ka mid ah dhinacyada ay u badan tahay inay niyadjabiso dad badani waa nidaamka hawlgalka. Tan iyo qalabkii wali waxay isticmaashaa Android 8.1 Oreo. Waxaa la filayay inuu ku imaan doono Android Pie, laakiin hadda waa inaad sugto ilaa aad ka hesho casriyeynta si rasmi ah. Ma garanayno goorta ay waxaani dhacayaan, malaha rubuca labaad ee sannadka.
Xiaomi waxay xaqiijisay in qalabkan si caalami ah loo bilaabi doono. Waxay sheegeen inuu dhowaan iman doono Yurub, inkasta oo xilligan aysan siinin taariikh cayiman oo ay u cayimaan. Sidaa darteed, waa inaan sugnaa macluumaad dheeri ah toddobaadyadan. Waxa aan hadda haysanno waa qiimaha bilawga qalabkan.
Sidii aan horeyba u soo sheegnay, waxaan helnaa dhowr nooc oo ah Xiaomi Mi MIX 3 5G. Kuwa ugu raqiisan waa nooca leh 6 GB oo RAM ah iyo 64 GB oo keyd gudaha ah. Kiiskan, Noocani wuxuu yeelan doonaa qiimo dhan 599 euro, sida shirkadda lafteedu horeyba u xaqiijisay. Ma naqaano qiimaha ay lahaan doonaan qeybaha kale ee aaladda. Laakiin waxaan rajeyneynaa inaan helno qiimayaashan dhowaan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Xiaomi Mi MIX 3 5G: Taleefanka 5G ee ugu horreeya ee Xiaomi waa mid rasmi ah waana kuu tijaabinay
Sawirada muujinaya muujinta 10X ee Huawei P30 Pro ayaa soo ifbaxaya
OUKITEL waxay taleefannadeeda cusub ku soo bandhigeysaa MWC